MOCKFACES: HADDII CAYAYAANKA UU YAHAY QOLOF AH FASAL, NOOCA IYO NIDAAMKU U TAAGAN YAHAY, QAABABKA NOLOSHA IYO SIYAABO KALA DUWAN OO LOOLA MACAAMILO - BEER CAGAARAN
Lacky: Qoondaynta xogta qallafsan iyo hababka xakamaynta cayayaanka
Marar badan, gurigeena, gaar ahaan haddii uu yahay guri dabaq ah, waxaa ka soo duulaya duullaanka cayayaanka kala duwan, kuwa ugu caansan ee ay yihiin dhar-barafka iyo baranbarada, laakiin sidoo kale waxaa jira martiyaal naadir ah - qoryaha. Caadi ahaan, cayayaanka ayaa la dhigayaa qolal leh qoyaan badan iyo si dhakhso ah u dhufta.
Qodobkan waxaan ka hadli doonaa hababka kiimikada ah ee wax ka qabta dhibaatadan waxayna kuu sheegi kartaa qaababka dadweynaha ee caan ah iyo waxtarka leh.
Noocee, fasalka iyo amarku waa qallaylkan?
Mokritsa waxaa ku jira fasalka kiriimyada sare iyo qaabdhismeedka noocyada isopods. Dadka qaarkood si qalad ah ayay u rumaysan yihiin in ay yihiin xayawaan waxayna ka tirsan yihiin sida xaariiqda oo kale, inkastoo tani aysan ahayn kiis. Tani waa wakiil qurux badan oo ka mid ah qabatooyinka qallalan, oo horseedaya qaab nololeed dabiiciga ah (inkasta oo ay jiraan noocyo qaar oo doonaya in ay ku noolaadaan meel u dhow hareeraha biyaha cusub ee cusbaynaya).
Maalinimada, injirta qoryaha oo ka qarinaya indhaha dadka, iyo cunnooyinka cuntada ayaa badanaa habeenkii. Goobidda iyo dhirta noolaanshaha waxaa loo isticmaalaa cunnooyin, marka ugu dambaysa waxay dhaawici karaan waxyeelada beeraha beerta.
Caawimaad! Dhulka dhul-beereedka, waxaa jira 3,600 nooc oo injirta qoryaha, tiro ah oo ku nool biyaha.
Lackes waxaa lagu gartaa jiritaanka qaab jireed oval., ee kor ku xusan waxaa jira xoogaa yar. Waxay lee yihiin laba lamaane antennae, labada kowaad ee si buuxda looma dhicin, waxayna u egtahay in yar yar, labada labaadna si xoog leh ayaa loo horumariyaa. Indhaha waxaa la geliyaa dhinaca bidixda iyo dhinaca midig ee madaxa. Waxaa jira lix lammaanood oo ah lugaha caloosha.
Hababka xakamaynta cayayaanka
Inkastoo xaqiiqda ah in qoryaha aan laheyn wax khasaare ah oo aan loo haynin caafimaadka bini'aadamka, waxaa lagu gartaa jiritaanka muuqaal aad u wanaagsan. Sidaa daraadeed, adoo seexanaya qolofkani, musqulaheeda markiiba waxay billaabmaysaa inay raadiso hababka looga hortagayo iyaga.
Khubarada xakamaynta cayayaanku waxay xusuusnaadaan in Nidaamka ugu waxtarka leh ee burburinta qoryaha waa isticmaalka kiimikada, laakiin ka hor inta aanad isticmaalin, waxaad u baahan tahay inaad ka takhalusto deegaanka si ay ufudud u noqoto dhalmo-qabatooyinkan. Taasi waa, haddii musqusha uu yahay mid qoyan, markaa waxaad u baahan tahay inaad ka takhalusto dhibaatadan kadibna kaliya sii wad dhirirka injirta qoryaha.
Waxaa ka mid ah kiimikada loogu talagalay burburinta qoryaha, waxaan kala saari karnaa kuwa soo socda:
aerosols kala duwan;
insecticides (waxay wax ku ool yihiin oo keliya marka ay jiraan tiro badan oo injirta qoryaha ah, markaad si toos ah ugu codsan karto daawada qaansiirka);
Ka hor intaadan isticmaalin mid ka mid ah habka lagu micneeyay, waxaad u baahan tahay inaad la socoto tilmaamaha isticmaalka. U hubso inaad raacdo amnigaoo ka kooban isticmaalka gacmo-gashi iyo dhuumo-maskaxeed.
Waa muhiim! Isticmaalka wakiil kiimikada, waa inaad ka baxdaa qolka dhowr saacadood, iyo wakhti go'an ka dib, u fiirso si fiican.
Sida hababka dadweynaha si ay uga takhalusaan qoryaha, halkan waxaad isticmaali kartaa barxadda cusbada. Dhinaca wareegga albaabka waxaad u baahan tahay inaad ku shubto xariiq hal mitir oo milix ah, iyadoo lala xiriirayo, injirta qoryaha ayaa fuuqbaxa. Habkani waa mid caadi ah oo waxtarkeeda waxaa lagu tijaabiyay dhowr jiilaal.
Sidoo kale daaweyn caan ah oo caan ah waa kuwan soo socda:
Boric acid. Macnaheedu wuxuu leeyahay sifooyinka sunta ah ee injirta qulqulka iyo dhexdhexaad u leh jirka jirka. Acid, inkastoo ay suntan suntan, ma keeni doonto waxyeello badan ee cayayaan ubax, sababtoo ah si loo burburiyo qolofka la soo bandhigay qalab this, waa in ay helaan guntooda. Laakiin, injirta qoryaha, waxay u badan tahay, inaysan liqi doonin miro cad oo aan la ogeyn.
Haddii qoryaha dabiiciga ah ay ka muuqdaan dhismooyinka warshadaha, markaa habka ugu waxtarka badan ee waxtarkooda loo gooyo waxay noqon kartaa isku dhafka sigaarka, ash soodhaha iyo basbaas (waxaa loo baahan doonaa in lagu shubo meesha ay alwaaxdu ku badan tahay raasamaalka). Xaaladaha deganaanshaha, habkan waa in aan loo isticmaalin, sababta oo ah basbaas cas oo dhalin doona dadka deggan waxyeellada qaabka indhaha lagu il-gooyo, gubashada cunaha iyo hindhisada.
Xulashada habka qaran ee qashin-qubka waa in lagu soo dhawaadaa dareen gaar ah.sababtoo ah waxaa jira sidoo kale talooyin noocan oo kale ah oo kaliya ma aha in laga takhaluso qolofka la tilmaamay, laakiin sidoo kale si weyn u kordhinayaan lambarkooda.
Tusaale ahaan, haddii ay hooyadey ogtahay injirta qoryaha dheriga ubaxa, ka dibna marnaba ha ku dhaqin xididdada warshadda biyo diirran ka dibna ka dibna ku beddel dheriga. Tan waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in haddii qolofta diirran ay ku xiran tahay xididdada ubaxa, biyo diiran ma gabi doonaan waxyeelo, laakiin, si ka duwan, waxay abuuri doontaa xaalado xitaa raaxo leh, tan iyo xididdada qoyan si toos ah u abuuraan jawi qoyan ee ciidda, iyo waa deegaan taas oo u wanaagsan ee taranta qoryaha.
Adiga oo tixgelinaya dhamaan sifooyinkaas injirta qoryaha, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u eegto heerka qoyaanka ee gurigaaga, ka dibna uma baahnid inaad raadiso hababka (labadaba dadka iyo kiimikada) si ay uga takhalusaan waxyaalahaan.
Marka xigta, fiidiyoow macluumaad ah oo ku saabsan habka caanka ah ee loola tacaalo injirta: